Motorola Moto X 2014, Nyochaa | Gam akporosis
Anyị na-anwale ọhụrụ Motorola Moto X 2014
Ọzọkwa ekele na mmesapụ aka na site n'ikike nke Motorola Spain, ma kpọmkwem site na enyi ahụ Víctor, taa anyị nwere ike iwetara gị nyocha vidiyo zuru ezu na nkwubi okwu anyi banyere ihe oma na ihe ojoo ihe ọhụrụ na-enye anyị Motorola Moto X 2014, na-enweghị obi abụọ otu njedebe nke na-akpata mmetụ taa na ọnọdụ gam akporo.
A na-atụ anya ọnụ na nke ahụ dịka anyị nwere ike ịhụ na nyocha vidiyo, O nwere ụfọdụ nkọwa ọrụ aka kachasị dị ala, na-amalite site na nhazi gị Omenala Sanpdragon 801 quad-isi na a kacha elekere ọsọ nke 2,5 Ghzna Adreno 330 GPU GPU na-enye anyị elu arụmọrụ na usoro nke ndịna, ezigbo maka agbapụ ndị kasị achọ egwuregwu; ọbụna na-aga site na ebe nchekwa ya, na-adabere n'ụdị nke 32 GB nke ebe nchekwa dị n'ime ha nile nwere ncheta 2Gb Ram nke kariri ihe zuru oke maka ahụmịhe onye ọrụ na-eji ire ụtọ na nke kwụsiri ike ọbụlagodi na-arụ ọrụ na ọtụtụ ngwa na-agba ọsọ na ndabere.
1 Emechara na imewe
2 Njirimara onye ọrụ
3 Igwefoto na multimedia
4 Nchekwa na obodo kwụụrụ
Emechara na imewe
Banyere imepụta ya, anyị na-ahụ ọnụ ọgụgụ dị mma ma mara mma, nke mechara na igwe ma nwee nhọrọ abụọ ịhọrọ na agba, na-enwe ike ịhọrọ otu ọcha version dị ka nke anyị na-ahụ na vidiyo, na a nwa mbipute. Ha niile nwere ike hazie site na weebụsaịtị Motorola na ngwa ahụ Moto Onye kere, site na nke anyị nwere ike ịhazi ọnụ Moto X 2014 anyị nke ọma, na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche na nke a na-apụghị ikwughachi. Ee, buru n’uche na ọrụ a erubeghị n’ala ndị Spen.
Banyere ogo nke ogwe gị 5,2 ″ dayameta amoled na mkpebi FullHD, na-agwa gị na maka m n'onwe ya ọ bụ ihe dị mma ka anyị wee nwee ike ịga n'ihu na-akpọ ya Smartphone na anyị enweghị ịkpọ aha dị ka Okpokoro.
Banyere ọrụ interface, na-ekwu na mkpebi Motorola na-efego a Android version 4.4.4 chara acha, ọ bụ n'ezie nnukwu ihe ịga nke ọma kemgbe mma arụmọrụ na oke mmiri nke ọnụ, ewezuga inwe ike ịnweta mmelite na ụdị ọhụrụ nke gam akporo L, nke na-ada ada, ụbọchị ole na ole mgbe ọ natara ọkwa Google Nexus.
Igwefoto na multimedia
Dị ka igwefoto ma ọ bụ igwefoto ngalaba nke ọhụrụ a Moto X 2014 metụtara, anyị ga-ekwu, ime ihe n'eziokwu opekata mpe na okwu nke igwefoto 13 megapixel n'azụ. nke dị mwute ikwu na ọ bụghị otu n'ime ike ya, kama nke ahụ ebe ọ bụ na anyị nwere igwefoto igwefoto dị mfe dịka anyị nwere ike iche n'echiche, na-efu nhọrọ nhazi akwụkwọ ntuziaka, ọnọdụ ọnọdụ ma ọ bụ karịa ọrụ ndị ngwaọrụ ndị a na-enwekarị gam akporo dị elu.
Na akụkụ nke 2 Megapixel n'ihu igwefoto mkpebi emepụtara maka selfies, gwa gị na n'adịghị ka igwefoto azụ, ọ na-enye anyị ihe zuru oke iji were selfies dị egwu, ụfọdụ sara mbara selfies ekele ya obosara mmetụta ejiri weghara onyogho mgbe ị na-ese foto.
Na ngalaba multimedia anyị na-ahụ nke ha okwu ihu abụọ nke ahụ na-enye anyị a ụda nkwenye ụda dị egwu, mgbe ị na-enye ya ọmarịcha mma mara mma ma mechaa.
Nchekwa na obodo kwụụrụ
Ọ bụ ezie na n’usoro nke ebe nchekwa dị n’ime obodo anyị nwere nsụgharị abụọ, nke na-eyi ka ọ dịtụ mma na anyị. 16 GB nke nchekwa dị n'ime, na ụdị ọzọ nke 32 Gb, anyị kwenyere na ọ bụ ezigbo nsogbu ma ọ bụ ọdịda siri ike, etinyela ihe nchekwa na mpụga dị ka onye na-ejide kaadị microSD, na ọ bụ ezie na anyị maara na ọ dakọtara na USB-OTG, maka ọtụtụ ndị ọrụ a na-adọghachi ha ntakịrị.
Akụkụ ọzọ na-adịghị mma, ma ọ dịkarịa ala a priori, anyị enwewo ike ịhụ na ikike nke batrị ahụ, nke mechara dịrị na 23oo mAh dị nnọọ anya site na njedebe dị ka Rịba ama 4, Galaxy S5 ma ọ bụ LG G3 nke na-enye anyị batrị ndị gbara gburugburu na ikpe niile 3000 mAh. Ọ bụ ezie na ọ ga-adị mma, ekwesịrị ịkọtara ya na iji ojiji nke ọnụ, ihe ọhụrụ Moto X 2014 enweghi nsogbu iji mezue ogologo ụbọchị ọrụ na-enweghị ịbanye na chaja USB.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Anyị na-anwale ọhụrụ Motorola Moto X 2014
Ọ ga-amasị m ka ị nyekwuo nkọwa gbasara batrị, nke bụ ihe kachasị amasị m, biko !!!!
Ojiji, oge nge ihu, njikarịcha ngwanrọ ...
Na vidiyo m kọwaara ya nke ọma, ekwuola m na site n'iji ọnụ ya mee ihe, ọ nwere ike iru ezigbo awa 24 nke nnwere onwe ya na ihe elekere abụọ nke ihuenyo, ọ bụrụ na anyị enye ya mkpisi, ihe dịka 16 18 awa n'etiti atọ na anọ awa nke ihuenyo na.
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime Smartphones kacha mma taa, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kacha mma. Ọ zuru oke, ọ bụ ezie na m na-echekwa na arụmọrụ batrị dị obere, mana bia, anyị na-eji ụbọchị niile ejiri ekwentị n'aka, ọkachasị na nke m. Eleghi anya nke a ga - eme ka ihe dị mma site na ọrụ ọhụụ ọhụrụ nke Google, ọ bụ ezie na enweghị m ike icheta ihe akpọrọ ya. Agbanyeghị, ọ dị ezigbo mma igosipụta, ekele!
Dropbox emelitere na nkwado iji bupụ faịlụ na kaadị SD, nkwado maka gam akporo L na ndị ọzọ
Etu esi ebipụta ozi WhatsApp na SMS na gam akporo